1 YEZIGANEKO 28 - IsiXhosa 1996 (XHO96) - BibleSA
1 YEZIGANEKO 281 YEZIGANE ... 28
Imiyalelo yokwakhiwa kwendlu kaThixo
281UDavide wawabiza onke amagosa akwaSirayeli ukuze aze kuhlangana eJerusalem: iinkokheli zezindlu, neenkokheli zamabakala ngamabakala kwabasebenza komkhulu, neengqwayi-ngqwayi zamabutho aliwaka kunye nalikhulu, namagosa ajongene nemihlaba nemfuyo (zinto ezo izezikakumkani noonyana bakhe), ndawonye namaphakathi asebhotwe, amagorha namatsha-ntliziyo amajoni.
2Ukumkani uDavide waphakama, waza wathi: “Khanindiphulaphule, mawethu, nani bantu bam. Ndandizimisele ukwakha indlu ukuze ibe yindawo ephumla kuyo ityesi yomnqophiso *kaNdikhoyo, esisihlalo seenyawo zoThixo wethu. Ndiwenzile ke amalungiselelo, 3kodwa uThixo uthe kum: ‘Asinguwe oza kwakhela igama lam indlu. Kaloku wena ulijoni, ibe ke uliphalazile igazi.’
4“Kambe ke uNdikhoyo uThixo kaSirayeli unyule mna kwindlu kabawo, ukuze ndilawule ngonaphakade kwaSirayeli. Wanyula uJuda ukuba abe yinkokheli, waza ke kwindlu kaJuda wanyula umzi kabawo; koonyana bakabawo ke wabona kufanelekile ukuba andenze ukumkani kwaSirayeli. 5Kubo bonke oonyana bam – ibe ke uNdikhoyo undiphe babaninzi – unyule unyana wam uSolomon ukuba ahlale esihlalweni sombuso kaNdikhoyo phezu koSirayeli. 6UNdikhoyo uthethe nam wathi: ‘Ngunyana wakho uSolomon oya kundakhela indlu kunye neenkundla zam, kuba ndinyule yena ukuba abe ngunyana wam, mna ke ndibe nguyise. 7Umbuso wakhe ndiya kuwuzinzisa ume ngonaphakade, ukuba ngaba yena uthe akagungqa ekuyithobeleni ayenze imiqathango nemithetho yam, njengoko kusenziwa ngoku.’2 Sam 7:1-16; 1 Gan 17:1-14
8“Ngoko ke ngoku ndiyakuyala apha phambi koSirayeli ephela nalo eli bandla likaNdikhoyo; ewe, ndithetha phambi koThixo wethu: Imiqathango kaNdikhoyo uThixo wakho yithobele ngenyameko, khon' ukuze nime kweli lizwe lihle kunene, nilidlulisele nakwizizukulwana ngezizukulwana, ukuze libe lilifa lazo ngonaphakade.
9“Ke wena, nyana wam Solomon, uze uhambisane noThixo kayihlo, umkhonze ngokuzimisela ngomxhelo wakho uphela nangengqondo evumayo, kuba kaloku uNdikhoyo uyayigoca-goca intliziyo, yaye ke uyaziqonda iinjongo zeengcinga zomntu. Ukuba uyamlangazelela uza kumfumana; kambe ke xa uthe wamlahla uya kukubukula kude kube ngunaphakade. 10Ngoku ke zikisa ukucinga, kuba kaloku uNdikhoyo ukunyulele ukuba umakhele indlu engcwele. Ngoko ke yomelela uwenze lo msebenzi.”
11Ke uDavide uyinikele kunyana wakhe uSolomon yonke iplani yesakhiwo eso, ivaranda namanye amagumbi endlu kaThixo, kunye noovimba bayo, ukuma kwayo phezulu, namagumbi angaphakathi, kananjalo nendawo yokucamagushela izono. 12Wamnika iplani yako konke awayekuthweswe nguMoya mayela neenkundla zendlu kaNdikhoyo namagumbi ayiphahlileyo, oovimba bendlu kaThixo kunye noovimba bezinto ezinikezelwe kuThixo. 13Wamyala ngezigaba zababingeleli nabaLevi nangawo wonke umsebenzi wokulungiselela endlwini kaNdikhoyo, nangokuphathelele kwizinto ezisetyenziswayo apho ekulungiseleleni endlwini kaNdikhoyo. 14Wabumisa nobunzima begolide eya kusetyenziswa kuyo nayiphi na into eyenziwa ngayo, ngokunjalo nobunzima besiliva kuzo zonke izinto ezaziza kwenziwa ngayo. 15Ubunzima begolide yeziphatho-zibane, neyezibane, ubunzima begolide yesiphatho-sibane ngasinye nezibane zaso, nobunzima besiliva kuso ngasinye isiphatho sibane esenziwe ngesiliva kunye nezibane zaso, ngokomsebenzi wesiphatho-sibane eso; 16ubunzima begolide kwitafile nganye yesonka somnikelo; ubunzima besiliva kwitafile nganye eyenziwe ngesiliva; 17ubunzima begolide ecwengileyo yokwenza iifolokhwe, izitya zokufefa, namathunga; ubunzima begolide kwisitya ngasinye esenziwe ngegolide, nobunzima besiliva kwisitya esenziwe ngesiliva; 18ubunzima begolide ecwengileyo yokwenza iqonga lesiqhumiso. Kananjalo wamnika neplani yokwenziwa kwenqwelo leyo yezo *zithunywa zimaphiko zazenziwe ngegolide, ezo zazithe naa amaphiko zifihle ityesi yomnqophiso kaNdikhoyo.
19UDavide wathi: “Yonke le nto ke ibhaliwe, kuba kaloku isandla sikaNdikhoyo sasiphezu kwam, wandinika ukuqiqa nokubuqonda bonke ubucukubhede.”
20UDavide ke uqhube wathi kunyana wakhe uSolomon: “Yomelela ukhaliphe, uwenze lo msebenzi. Uze ungakhe ube nayo idyudyu, utyhafe; kaloku uNdikhoyo uThixo onguThixo wam ungakuwe. Akasokuze akuyekele, okanye akulahle, ude ube uphumelele wonke lo msebenzi wokwakhiwa kwendlu yakhe. 21Izigaba zababingeleli nabaLevi seziwulungele wonke umsebenzi wendlu kaThixo, yaye ke yonke indoda ezimiseleyo kulawo anobuchule nakuyiphi na inkalo iya kusebenzisana nawe kuwo wonke umsebenzi. Onke amagosa nabantu ngokunjalo baya kuwuthobela nawuphi na umyalelo wakho.”